Madiiddo Diimeedka Sucuudiga ! – Maandoon
March 11, 2018 Salim Said 0 Comment
Sida baraha bulshada lagu faafiyey, sawirka hoos ka muuqdaana uu muujinayo, waxaa jira dadaallo ay wado dawladda Sucuudiga oo ay ku doonayso hirgelinta mashaariic waxbarasho oo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya laga hirgeliyo. Yeelkadeede, su’aashu waxay tahay: Sucuudigu ma doonayaa in uu dalka ka hirgaliyo tacliin isu dheeli tiran oo baahiyaha aqooneed uu ummadda sida macaahid farsamo, macaahid noo soo saara dhakhaatiir caafimaad, enjineero iyo khubaro dhanka beeraha , badda iyo xolaha ah? Haddii qorshaha Sacuudigu uu sidaa yahay wuxuu mudan yahay bogaadin iyo soo dhaweyn.
Haddiise sidii caadadu ahayd uu doonayo inuu noo sameeyo macaahid shareeco la qaloociyay ama dan laga leeyahay lagu barto , oo hadhaw soo saarta kooxo u shaqeeya danaha iyo afkaarta Sucuudiga taasi waa mid lugooyo maahane aan wax soo kordhinayn, waxaana leenahay sidii Imaam Cali Bin Abii Daalib yiri , Allaha ka raali noqdee “waa luggooyo wanaag loo ekaysiiyay”.
Barashada diinta waxaa noogu filan macaahidda iyo jaamacadaha hadda dalka ka furan , kooxo iyo afkaar kala duwanna inta haatan jirta ayaa dalka culays ku ah , ee haddii aan wax kale meesha ku jirin tacliinta la sheegayo ha ka tarjunto baahida dalka ka jirta.
Waxaan ognahay in Sucuudiga uu haatan baqti afuufayo fikir diimeed cusub (السلفية الجامية أو المدخلية) oo uu doonayo inuu ku faafiyo dunida Muslimka , waana afkaar la yaqaan oo xagjir ah, umaddana fitno u horseeda sida laga arkay Yemen oo fitnada maanta dalkaas ka taagan ay ka kacday kooxdaas oo xoog loogu abuuray meel Sacda la yiraahdo sidaasna ku kicisay Zaydiyadii awal sunniga aan farqiga wayn u dhaxayn . Waa fikir uu Sucuudiga abuuray dagaalkii Ciraq ay ku qabsatay Kuweit ka dib si loo wiiqo afkaarta salafiyada dhexdhexaadka ahayd ee qaarkood ka biya diiday u habar wacashadii Maraykanka iyo reer Galbeedka kale . Haatana fikrikaan dib ayaa boorka looga jafay , isaga oo ay khubaro reer Galbeed ah lagala tashaday , waana fikir subaga ka saaraya Islaamka oo ka dhigaya ciir aan macno badan lahayn.
Fikirkaan waxa lagu fidiyaa dadyawga aan wacyiga lahayn, ee la ildaran jahliga iyo maan-gaabnimada , waana hannaan lagu daroogaynayo ummadaha iyada oo loogu soo gaban diin. Waxa dadka loogu sheekaynayaa waxaan idinka dhaqaynaa afkaar diimeedka xag jirka ah , waxaana fidinaynaa Islaam reer magaal ah oo nolosha la jaanqaada, laakiin runtu waxa weeye in Soomaalidu haddii aan iimaanka Alla ka qaadin aqoon diimeed aanay magan uga noqon karin Sucuudiga maalin walba kitaabada cusub la soo baxaya.
Dawladda dhexe iyo maamul-goboleedyadu yaanay iyagoo xoogaa lacag ah xeerinaya dalka u soo jiidin in lagu fidiyo afkaar diimeed aan ka khatar yarayn afkaartii shiicanimada ahaa ee safaaradda Iran dalka looga cayrshay. Haddii kuwa Sucuudiga dalka lagu soo daayo, raga ay ciilayaan hadhaw yaan lagu qabsan haddii ay iyana Iran hiil u doontaan sidii Zaydiyadii Yemen lagu ciilay ee dabkii halkaas ka dhashay dal dhan ku holcayo maanta .
Saalim Saciid Saalim
← 8 Maaris ka dabogee ..
Eebbe kulama dhalan! →